चिकित्साशिक्षा विधेयक सोमबार पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी – Health Post Nepal
२०७५ माघ ६ गते २१:००
सरकारसित १५औँ अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन जारी रहेकै अवस्थामा संसद्ले सोमबार विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको दैनिक कार्यसूचीमा सोमबारका लागि चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्ने सूचीमा राखिएको हो ।
कार्यसूचीको नम्बर ९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम छ । पहिलो चरणमा ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसलगत्तै सोही विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक मध्याह्न १२ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
उपसमितिले सम्झौताविपरीत विधेयकमाथि बहुमतका बलमा प्रतिवेदन पारित गरेलगत्तै डा. केसीले अनशन सुरु गरेका थिए ।
आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको केसीसँगको सम्झौता, त्यसले निम्त्याएको डा. केसीको १६औँ अनशनलगायत विषयमा प्रतिपक्षी सांसद्हरुको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सरकारले गरेको सम्झौताले सार्वभौम संसद्को सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन नसक्ने भन्दै उपसमितिको प्रस्तावमा पूर्ण संसद्ले फेरबदल नगर्ने संकेत यसअघि नै दिइसकेका छन् । तसर्थ, भोलिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक पारित हुने सम्भावना बलियो छ । त्यसो भएमा डा. केसीको अनशनले तत्काल विश्राम नपाउने पक्का छ ।